Hay Ve Tsy Maharo Amin’ny Fandrahonana Ara-politika Avy Amin’i Beijing Na Dia Mpomba An’i Shina Ao Hong Kong Aza! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Septambra 2016 13:40 GMT
Noteren'ny sampan-draharaha miafin'i Beijing hiala tamin'ny fifidianana solombavambahoaka i Chow na dia mpomba an'i Shina hatrany aza izy sy ny antokony. Sary tao amin'ny Facebookn'i Chow.
Ity dia famintinana feno amin'ireo andian-tatitra nivoaka tao amin'ny Hong Kong Free Press teo anelanelan'ny 31 Aogositra sy 8 Septambra 2016. Navoaka tato amin'ny Global Voices izany noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Ohatra iray amin'ny hery ambadika ara-politika goavana ataon'i Beijing ao an-tanànan'i ao Hong Kong ny fialàna tampoka nataon'ilay kandidà mpomba an'i Shina tamin'ny firotsahana hofidiana, herinandro mialoha ny fifidianana solombavambahoaka.
Nanambara tsy nampitandrina ny kandidàn'ny Antoko Liberaly Ken Chow Wing Kan fa niala tsy hirotsaka hofidiana izy nandritra ny adihevitra tamin'ny 25 Aogositra. Rehefa avy niakan-tsehatra tamin'ny fahitalavitra, tsy nahatana ny ranomasony izy nandritra ny tafatafa tamin'ny fampahalalam-baovao, nilaza izy fa tsy te hampidi-doza ny fianakaviany sy ny namany ary tsy nety nanambara ny antony amin'ny antsipiriany bebe kokoa – afa-tsy ny teritery mahazo azy avy amin'ny manam-pahefana matanjaka kokoa noho ny solontenan'ny governemanta foibe Shinoa ao Hong Kong, fantatra amin'ny anarana hoe ny Biraom-pifandraisana, na tambajotra fikambanan-jiolahy ao an-toerana.
Nandao an'i Hong Kong i Chow ny ampitso, saingy taorian'ny fifidianana tamin'ny 6 Septambra, nipoitra indray izy ary nanambara ny antsipiriany tany amin'ny sampan-draharaha ao an-toerana misahana ny fiadiana amin'ny kolikoly ao Hong Kong, ny Vaomiera Mahaleotena Miady amin'ny Kolikoly, ary ny haino aman-jery mikasika ny fandrahonana ara-politika nanery azy niala tsy nirotsaka hofidiana.
Nilaza izy fa nanery azy hiala ny “sampan-draharaha miafina” ao Beijing. Nolazainy tamin'ny mpanao gazety taorian'ny fihaonana tamin'ny polisy fa notaritin'ny namana hankany Shenzhen, tanàna ao Shina ao amin'ny sisintany miaraka amin'i Hong Kong izy ary nampahafantarina olona telo avy any Shina tanibe izay nangataka taminy mba hampiato ny fampielezan-kevi-pifidianany. Nandrahona azy ireo olona telo ireo tamin'ny alalan'ny famakiana ny antsipiriany manokana mombamomba ny fianakaviany sy ny namany akaiky:
Tsy fantatro ny fomba nahafantaran'izy ireo ny fianakaviako, anisan'izany ny olona tena akaiky ny fianakaviako, ireo namana lehibe mpanohana ahy, ny mombamomba azy ireo, ny fidiram-bolan'izy ireo, ny fahazaran'izy ireo – novakiana tsirairay izany, ary nanomboka nahatsapa tahotra aho.
Fantatrareo fa na ireo mpanao famotorana manokana aza tsy mahafantatra izany vaovao izany. Avy eo nilaza izy ireo fa raha tsy manaraka ny baikonay ianao, handray fepetra avy hatrany izy ireo, fa ireo mpanohana ahy no hizaka mafy ny vokany.
Nomena torolalana izy avy eo mba tsy hanatrika intsony ny adihevi-pifidianana rehetra, mampiato ny fampielezan-kevi-pifidianana rehetra ary handao an'i Hong Kong mandra-pahavitan'ny fanisam-bato.
Talohan'ny fandrahonana voalaza etsy ambony, manam-pahefana isan-karazany no efa nandrisika azy imbetsaka mba tsy hirotsaka hofidiana. Tao amin'ny Biraom-pifandraisana ny roa tamin'ireo fihaonana, izay olona roa avy any Shina tanibe no nilaza taminy fa tsy mahazo ny tso-dranon'izy ireo izy – na dia mpomba an'i Shina ara-politika aza – ary nolazaina izy mba hiala amin'ny fifaninanana ho takalon'ny toerana ao amin'ny governemanta Hong Kong.
Tamin'ny fotoana hafa indray, namany iray manana fifandraisana amin'i Beijing sy ireo mpitarika eny ambanivohitra ao an-toerana no nanome 5 tapitrisa dolara Hong Kong (eo amin'ny 650.000 dolara amerikana) azy, vola avo roa heny amin'ny fandaniany amin'ny fifidianana, ho takalon'ny fanatsaharana ny fampielezan-keviny.
Mihevitra i Chow fa natao hiala izy mba hanokafana lalana ho an'ny kandida hafa mpanohana an'i Beijing, Junius Ho Kwan yiu, izay mpanohana ny mpitarika ambony ankehitriny ao Hong Kong, Lehiben'ny Mpanatanteraka Leung Chun Ying.
Etsy andanin'izany, na dia mpanohana an'i Beijing koa aza i Chow, mpitsikera an'i Leung izy, ary efa nanakiana an'i Leung ho nanimba ny filaminana tao amin'ny Zaratany Vaovao, faritra lehibe indrindra ao Hong Kong:
Hatramin'ny nandraisany ny fahefana, tsy misy intsony ny firindrana taloha teo amin'ireo faritra ambanivohitra sy andrenivohitra tao amin'ny Faritany Vaovao; Nosoloina tombontsoa manokana ny soatoavin'ny rariny sy ny fahamarinana, dia ny harem-pitsipik'i Hong Kong; Miompana amin'ny fahaiza-manao ny sehatry ny fandraharahana taloha saingy miompana amin'ny fahalalàna olona sisa izany ankehitriny.
Nandritra ny adihevitra momba ny fifidianana, niampanga an'i Ho ho mandainga amin'ny ny maha teratany azy amin'ny vondrom-piarahamonina vazimba teratany i Chow kanefa taorian'ny 1898 ny tanànan'i Ho vao niorina tao Hong Kong.
Ny mponina vazimba teratany ao amin'ny Zaratany Vaovao dia voambolana ara-pitsarana vao noforonin'ny governemanta Britanika mpanjanaka tamin'ny taona 1970. Manondro ireo olona avy amin'ny taranaka lehilahy efa nanorim-ponenana tao Hong Kong hatramin'ny taona 1898 izany. Manana zo manokana hanorina trano kely any amin'ny Zaratany Vaovao ity vondron'olona ity raha mahita tany sahaza amin'izany. Amin'ny maha-vondrona manokana miaro tombontsoa azy, dia ireo manana sata maha-indizeny (teratany) ihany no hofidian'ny vondrom-piarahamonina indizeny (vazimba teratany).
Nandà ny kolikoly rehetra natolotra azy i Chow, saingy nilefitra rehefa lasibatry ny fandrahonana ireo namany sy ny fianakaviany. Nahazo seza farany tao amin'ny Faripifidianan'ny Zaratany Vaovao Andrefana ihany i Chow tamin'ny vato tokony ho 35.657, latsaky ny 6% amin'ny fitambaran'ny vato tao amin'ny distrikam-pifidianana.
Mihevitra i Chow fa tsy hahavita manadihady tanteraka ny fandrahonana ireo manam-pahefana eo an-toerana satria avy any ivelan'i Hong Kong izany, mitovy amin'ny raharahan'ny mpivaro-boky nanjavona.